Moto G10 na Moto G30 bụ ntinye ọhụụ nwere nnukwu batrị na gam akporo 11 | Gam akporosis
Motorola chọrọ ịkpọsa ngwaọrụ ọhụrụ abụọ n'okpuru usoro G, niile leakage nke ọ dịkarịa ala otu n'ime ihe ndị mejupụtara ya, Moto G30. Amaghi ihe banyere Moto G10, ekwentị nke na-abịa maka ndị chọrọ nnwere onwe na nkọwapụta dị mma.
Moto G10 na Moto G30 gosipụtara dị ka ọkwa ọhụrụ ọhụụ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ, nke dị mma bụ na ha abụọ wụnye ụdị kachasị ọhụrụ nke gam akporo. Ejirila atụmatụ nke abụọ lekọta nke kachasị iji nye ezigbo ergonomics, na njedebe ahụ ha abụọ na-eme ka ọkwa ahụ dị ndụ, ihe ọ dị ka ọ ga-efu oge.
1 Moto G10, ekwentị na-arụ ọrụ nke ọma
2 Batrị, njikọta na sistemụ arụmọrụ
3 Moto G30, etiti dị ụtọ
4 Batrị, njikọta na sistemụ arụmọrụ
4.1 Mpempe akwụkwọ nka na ụzụ
5 Nnweta na ahịa
Moto G10, ekwentị na-arụ ọrụ nke ọma
Moto G10 bụ otu n'ime ọnụahịa ndị e mere iji dịruo ụbọchị niile, ebe ọ na-agbakwunye ihe nhazi Snapdragon 460 tinyere Adreno 610 eserese eserese.
Ihuenyo bụ ụdị 6,5-inch IPS LCD nke nwere ụdị HD +, ọnụego ume ọhụrụ bụ 60 Hz na nchekwa Gorilla Glass 5 adịghị efu. Akụkụ ahụ na-anọ 14%, ebe panel ga-anọ 86 fọdụrụ na igosi ihe eserese esighi na waterdrop maka igwefoto n’iru.
Ihe dị mkpa dị n'elu, ebe ọ na-arịgo anya anya anọ, nke kachasị bụ megapixels 48, nke abụọ bụ 8pipixel obosara, ndị ọzọ fọdụrụ bụ nnukwu megapixel 2 na otu miri emi. Igwefoto n'ihu na-echere na 8 megapixels iji mee ihe n'ihu foto na vidiyo.
Batrị, njikọta na sistemụ arụmọrụ
Batrị dị na ekwentị ndị a weere dị ka ihe dị mkpa, cell bụ 5.000 mAh ma na-ekwe nkwa nnukwu arụmọrụ n'etiti CPUs na batrị. Ego ahụ na-anọ na 10W, zuru ezu iji kwụọ ya karịa otu elekere, na-ekwe nkwa ịnwụ karịa awa 24 na iji ya eme ihe.
Na mpaghara njikọta, Moto G10 bụ ngwaọrụ 4G, ọ na-agbakwunye njikọ Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, igwe okwu ekweisi, USB-C na ọ bụ Dual SIM. Akara mkpisiaka na azụ, emi odude ke logo nke ekwentị dị ka ọ na-eme na ọtụtụ n'ime ha igwe si afọ abụọ gara aga.
Moto G10 sistemụ arụmọrụ bụ gam akporo 11, -abịa emelitere ọhụrụ version na ya ọtụtụ atụmatụ dị ka na-atụ anya. The interface na-ekwe nkwa a pụtara ngwa ngwa omume oge, na na-agbakwunye a kpọmkwem ohere bọtịnụ Google nnyemaaka na ọ bụ IP52 gbaara.
MGBE OZI G10
IKIRU 6.5-anụ ọhịa IPS LCD na HD + mkpebi / 60Hz ume ọhụrụ / ozodimgba iko 5
Nhazi Qualcomm Snapdragon 460
Nchekwa n'ime 64/128 GB / Nwere oghere MicroSD
Gbanwee CAMERA 48 megapixel f / 1.7 main sensor / 8 megapixel f / 2.2 wide-angle sensor / 2 megapixel f / 2.4 nnukwu ihe mmetụta / 2 megapixel f / 2.4 omimi sensor
Njikọ 4G / WiFi 5 / Bluetooth 5.0 / NFC / USB-C / Isi okwu Jack / Dual SIM
NDỊ ọzọ Rear akara mkpisiaka agụ / IP52 asambodo / raara onwe ya nye Google nnyemaaka bọtịnụ
Mbibi na ibu ibu 165.22 x 75.73 x 9.19 / 200 gram
Moto G30, etiti dị ụtọ
El Moto G30 Ọ bụ otu n'ime ekwentị abụọ ga-etu ọnụ na ị zutere ihe ọ bụla onye ọrụ chọrọ, ebe ọ na-abịa na ihuenyo 6,5-inch HD + IPS LCD Max Vision. Ume ume ọhụrụ na-abawanye ruo 90 Hz na imewe ahụ dị na plastik na nhapu mmiri dịka o nwere asambodo IP52.
Ugbua n'ime ihe nlere a na-ahọrọ maka processor Snapdragon 662 nke esonyere Adreno 610 graphics chip, bụ mgbanwe nke 460, mana ọ bụ obere mmelite na oge elekere na arụmọrụ. Enwere ike inweta ya na ụdị nke RAM nke 4 na 6 GB, ebe nchekwa na otu ntọala nke 128 GB, mana ọ na-agbakwunye oghere MicroSD nke dị 512 GB.
Igwefoto kachasị bụ 64-megapixel Quad Pixel, nke abụọ bụ 8-megapixel wide angle, nke atọ bụ 2-megapixel macro, nke anọ bụ 2-megapixel omimi inyeaka. Ihe mmetụta ihu dị 13pipixels ma dekọọ vidiyo vidiyo zuru ezu, na-eme foto foto dị elu.
El Moto G30 gụnyere batrị 5.000 mAh nke zuru ezu iji nye ya ikike karịa 24 awa na-enweghị ebubo ya, ihe dị mma bụ na ngwaọrụ ahụ na-enweta ụgwọ 15W. Iji kwụọ ụgwọ ya na 0 ruo 100 ọ na-ewe ihe dị ka elekere elekere na nkeji iri, ebe ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịgba ụgwọ karịa 20%.
Ọ na-aghọ ọnụ n'okpuru netwọk 4G / LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, USB-C maka ịgba ụgwọ, 3,5mm jack headphone na ngwakọ DUal SIM. Akara mkpisiaka na azụ, mgbe o nwere ogwe aka n’akuku iji mepee Google Assistant. Ọ na-abịa na asambodo IP52 iji weghachite mmiri.
Dị ka Moto G10, Moto G30 na-amalite site na gam akporo 11 dị ka sistemụ arụmọrụ, oyi akwa ga-anọgide na-abụ MyUX na enwere ọtụtụ ngwa ọ na-eji abịa. Ọ na-abịa na patch maka ọnwa nke Jenụwarị na atụmatụ niile nke usoro iri na otu nke usoro Google.
MGBE OZI G30
IKIRU 6.5-anụ ọhịa HD + IPS LCD Max Vision na 1.600 x 720 pixel mkpebi / 90 Hz ume ume ọnụego (Ratio: 20: 9)
Nchekwa n'ime 128 GB / nwere oghere MicroSD nke na-akwado 512 GB
Gbanwee CAMERA 64 MP Quad Pixel f / 1.7 isi ihe mmetụta / 8 megapixel f / 2.2 obosara-ihe mmetụta / 2 megapixel f / 2.4 nnukwu ihe mmetụta / 2 megapixel f / 2.4 omimi sensor / HDR
N'ihu CAMERA Ihe mmetụta 13 MP
Njikọ 4G / WiFi 5 / Bluetooth 5.0 / NFC / USB-C / Isi okwu Jack / ngwakọ Dual SIM
Moto G10 batara na nsụgharị abụọ, nhọrọ bụ isi nke 4/64 GB Ọ ga-eri ihe ruru euro 159, ebe ụdị 4/128 Gb egosibeghị ọnụahịa ya, mana ọ bụrụ na a ga-ahapụ ya na February 17. Agba ndị dị na ya nke ọ rutere nọ na agba ntụ na ọcha, nke ikpeazụ na mbipụta pụrụ iche.
El Moto G30 ga-enwekwa nsụgharị abụọ,, ọ bụ ezie na ọ ga-agbanwe na RAM, ebe ọ bụ na ụdị 4/128 GB ga-abata na Spain na njedebe nke March maka euro 219 na agba ojii na odo. Modeldị 6/128 GB maka oge a na-amaghị ọnụahịa, ọ bụ ezie na ọ ga-abawanye site na 20/30 euro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Moto G10 na Moto G30 bụ ụdị ntinye ọhụụ nwere nnukwu batrị yana gam akporo 11